`हाम्रो पार्टी´ एकाएक किन पतन हुनपुग्यो? - JagaranPost
Home/थप/समाज/`हाम्रो पार्टी´ एकाएक किन पतन हुनपुग्यो?
`हाम्रो पार्टी´ एकाएक किन पतन हुनपुग्यो?
हाम्रो पार्टि किन एकाएक पतन हुनपुग्यो? यसवारेमा जागरणपोस्ट डट कम का प्रधानसम्पादक बिजय ज्ञवाली ले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुभएको लेख निकै घतलाग्दो लाग्यो र हामीले पनि यहाँ सम्प्रेषण गरेका छौं।
शुरुमा रोचक भिडियो प्रस्तुत गर्दथ्यो, तथ्यांकसहित। शब्द अलिक कडा भए पनि पचाईएकै थियो। भिडियोमा अत्याधिक लाईक, कमेन्ट तथा शेयर हुन्थ्यो।
एकदिन नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले भ्रष्टाचारविरुद्धको यौटा भिडियो मलाई पनि पठाऊनुभयो। भिडियो खुवै मननयोग्य थियो, जुन भिडियो हाम्रो पार्टी नामक संस्थाले बनाएको रहेछ।
भिडियोसंगै फेसबुक पेज पनि खोतल्दै गएँ। हाम्रो पार्टि फेसबुक पेज र अनेकानेकन भिडियो, लाइक, कमेन्ट अनि शेयरको वर्षात देखें मैले। सांच्चिकै सामाजिक संजालका माध्यम परिवर्तन नै गर्छ कि के हो भन्ठानेर यो पेजलाई लाईक अनि SEE FIRST मात्रै गरिन, यो दलको सदस्य बन्नुपर्यो भनेर ईमेल गरें। ईमेलअनुसार मैले गुल्मी जिल्लाको नेतृत्व लिन्छु पनि भनें। हाल म पूर्वी अफ्रिकी मुलुक तान्जानियामा भएको हुनाले हजुर नेपाल फर्किएपछि गुल्मी जिल्लाको नेतृत्व सुम्पिनेछ भनेर हाम्रो पार्टिले म्यासेजको रिप्लाई गरेको थियो।
पछिल्ला दिनमा हाम्रो पार्टिको शैली, शब्द, व्यवहार अनि पोस्टहरु हेर्दा मलाई आफैलाई ईरिटेड लागेर आयो र यो फेसबुक पेजलाई अनलाइक, अन्फ्लो गर्न बाध्य भएं। नेपालमा यौटा पनि मान्छे गतिलो नभएको निष्कर्ष हाम्रो पार्टिको रहेछ।
गतिलो को रहेछ त?
हाम्रो पार्टिका अध्यक्ष शेखर कार्की पहिले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्ध म्यानपावरमा दलाली काम गर्दारहेछन। प्रकाश थापा (बागलुङ) लाई एक हप्ताभित्र कतार उडाईदिने आश्वासनमा ३७००० लिएपछि गायव भएका कार्कीविरुद्ध प्रकाशले विभिन्न निकायसंगै न्यूज २४ मा प्रसारित हुने कार्यक्रम `सिधाकुरा जनतासंग´को स्टुडियोमा पनि गएर उजुरी गरेछन। सिधाकुरा जनतासंगको कार्यम्रमले शेखरको नालीवेली सार्वजनिक गरेपछि शेखर १५ दिनजति प्रहरी चौकिमा समेत थुनिएका रहेछन। हाम्रो पार्टिको फेसबुक पेजमा शेखरले `सिधा कुरा जनतासंग´ का संचालक रवि लामिछानेविरुद्ध एकप्रकारको ` बीष´ लेखेछन, इवि साँध्नको लागि। तर, परिणाम भारी परिदियो, महंगो परिदियो हाम्रो पार्टिलाई।
रानो र कानो अरिंगाल हावी भएको देशमा हाम्रो पार्टिले रविका विरुद्ध भद्दा शब्द पोख्नेवित्तिकै रविका अरिंगाल पनि हाम्रो पार्टिमाथी खनिए। रविविरुद्ध हाम्रो पार्टिले आफ्नो फेसबुक पेजमा रविको फोटोसहित “पत्रकारिताको `प´ थाहा नभएको यो मान्छे अमेरिकामा भएको भए जागिरै पाऊनेथिएन, लाटो देशको गाँडो तन्नेरी ” आशयको पोष्ट तस्विरसहित पोष्ट गरेपछि २ दिन मैं हाम्रो पार्टिको कूल ३ लाख ६६ हजार आसपास लाइक भएको हाम्रो पार्टिको लाईक घटेर २ लाख २४ हजार ७० मा घटेको छ, यो कथन तयार पार्दासम्म।
हाम्रो पार्टिले बनाएका भिडियो त अत्याधिक शेयर हुन्छन, तर शब्द चाहिँ इरिटेड नै लाग्दछन। भुत्राको, जाँंठो, खैंजडे लगायतका तल्लोस्तरका शब्द प्रयोगमा ल्याऊने गरेको हाम्रो पार्टिको शैलीप्रति इरिटेड लाग्दालाग्दै पनि अनलाइक गरिएको थिएन। तर, यथार्थ थाहा पाएपछि उक्त पार्टीको फेसबुक पेजलाई एक मिनेट पनि लाईकयोग्य ठानिन।
शव्दले मान्छेलाई चिनाऊँछ।”
सामाजिक संजाल दर्ता नभए बन्द गरिने
जिऊँदी नर्मतालाई जवर्जस्ती मार्न खोजेको दर्दनाक कथा